Date My Pet » 12 Tsy maintsy Haves Fa Mrs. Right
Last nohavaozina: Dec. 02 2020 | 2 min namaky
1. Olona iray izay liana amin'ny fihazonana ny fiainany raha mizana. Aoka ho izany ny tantaram-pitiavana fifandraisana, ny fianakaviany, ny asany, ny tenany sy ny volunteerism. Olona iray izay liana amin'ny manodidina azy nipetraka ara-tsindrimandry ny fiainantsika. Afaka mampiasa kely rehetra aingam-panahy.
2. Ny olona iray izay manana herim-po mba ho mora rehefa ilaina sy assertive raha ilaina izany. Dia misafidy ny hiresaka amin'ireo izay manana simia taminy fa izy dia afaka manao Mazava Tsara rehefa ilaina.
3. Olona iray izay afaka ho tena amin'ny. Ny olona iray izay tsy maika ny mpitsara fa hanome tanana mba hahatakatra sy hahita olona iray ihany no afaka manaiky ny tsy mitovy hevitra.
4. Nisy olona iray izay compliments ny 3 Na diso ratsy kokoa ny momba anao, ary ianao dia midera ny 3 ratsy kileman-toetra. Fiaraha-dia fototra. Hitady olona iray izay afaka mandray anjara amin'ny ny fiainanao rehefa manao an'ny renibeny. Long mandreraka checklists tsy nanafaka; fa iray amin'ny tsara indrindra shackle.
5. Ny olona iray izay misafidy ny ho tsara fanahy fa tsy tsara. Avy ny mpandroso sakafo any amin'ny olona tsy manan-kialofana eny an-dalambe ny tenany.
6. Olona iray izay afaka milaza izy nalahelo. Hitako fa ny fahavononana hanaiky fahadisoana dia dingana lehibe mankany amin'ny fanasitranana. Matetika, fa efa ampy izany.
7. Olona iray izay lehibe conversationalist. Ianao tia miresaka fotsiny ny azy, satria izy no tena multi-faceted sy mahaliana.
8. Olona iray izay liana tsaina. Manontany fotsiny izy mikasika ny zava-drehetra, miahy ny fanatsarana ny tenany, ary tsy mitsahatra mianatra.
9. Ny olona iray izay te handeha amin 'ny alalan' ny fotoana mafy aminao. Izy dia manana ny tena be fikirizana hitsangana eo amin 'anao sy manohana anao, rehefa zava-mitranga any atsimo.
10. Olona iray izay mikarakara tsara maka ny biby fiompy. Dia mahatonga ny azo antoka ara-pahasalamana izy ireo, madio sy sambatra. Raha milaza izy fa tia ny biby fiompy ao dia ny toetry ny disarray, sary an-tsaina raha toa ka tia anao? Mahazo ny mandresy ianao.
11. Olona iray izay tsy tapaka manao zavatra kely ho anao. Ny andro sy ny andro izany fanoloran-tena ny manao ireo zavatra ireo, hoy ny be.
12. Ny olona iray izay manana fomba fijery ara-bola koa. Te-hanorina tranon'omby mba ho avy ara-bola dia afaka mahazo ny fifandraisanareo. Ny zavatra farany tianao atao ny ady momba ny vola.
5 Angano ny hampiaraka ny olona rehetra dia Amin'ny hevitr 'Marina